जकाल धेरै विधार्थीहरुको मुख्य गन्तब्य हो-अस्ट्रेलिया । १२ कक्षाको नतिजा सँगसँगै शुरू हुन्छ कन्सल्ट्यान्सी धाउने खेती । कुन कन्सल्ट्यान्सी ठीक र सहि सुचना सम्प्रेसण गर्नै बुझ्नै लाग्छ कैयौ हप्ता । साथीले कहाँबाट एप्लाई ... पूरा पढ्नुहोस्
They eat wastes and shit gold” this sounds crazy but they really do it. I’m talking about red worms (also wrigglers) scientifically called as Eisenia fetida.... पूरा पढ्नुहोस्
ढ्ने, पढाउने, लेख्ने, साहित्य रचना गर्ने यो समूह माझमा आफूलाई पाउँदा बढो खुसी लागेको छ । तर यही समूह माझ केही कुरा बोल्नु पर्दा भने छाती ढक्क फुलेर पनि आएको छ । के कुरा गर्ने होला, कुरा कसरी सुरु गर्ने होला.. आदि आदि। ... पूरा पढ्नुहोस्
त्याउनु हुन्छ ! बेलायतकी महारानीभन्दा उपन्यासकार, लेखक जे के रोलिङ १७ गुणा धनी छिन् । उनी बेलायतकी तेरौ धनी महिला पनि हुन् । किन धनी भइन थाहा छ ? कारण हो, उनले लेखेको ‘ह्यारी पोर्टर’ भन्ने उपन्यास र फिल्म । उनले ह्यारी पोर्टरको सिरिज नै प्रकाशन गरिन् ।... पूरा पढ्नुहोस्
ducation isaprocess of learning, teaching and training to improve knowledge and develop skills. It hasavery important role to play in shaping, molding,... पूरा पढ्नुहोस्
शिक्षकलाई टिपिडी : विद्यार्थीलाई पिटिपिटि ?
ेपालमा शिक्षकले तालिम लिन थालेको करिब ७० वर्ष हुन लाग्यो । तालिम लिएपनि शैक्षिक उपलब्धि भने अपेक्षित बन्न सकेको छैन् । अहिले विद्यालय शिक्षाका सबै शिक्षकहरु तालिम प्राप्त छन् ।... पूरा पढ्नुहोस्
o you hesitate in giving presentation? Every person involved with the academic improvement should present at one time or the other. In fact it has becomeanecessity... पूरा पढ्नुहोस्
नमोहनको नाममा त्यो रहने हुँदा राज्यले उहाँको योगदानलाई सम्मान गरेको ठहर्छ। र तीन, राज्यले विगतमा लिएको गलत र अदूरदर्शी नीतिका कारण लामो समयदेखि लगानी गरेर व्यवसाय गर्न खोजेका लगानीकर्ताको पैसा डुब्दैन, उनीहरू अन्यत्र लगानी गरेर फेरि व्यवसाय गर्न स्वतन्त्र हुने छन्। ... पूरा पढ्नुहोस्